लक्ष्मी बैंक विश्लेषण - Aathikbazarnews.com लक्ष्मी बैंक विश्लेषण -
is essay written in first person ego4u creative writing homework help cc algebra good descriptive words to use in creative writing master of studies creative writing cambridge creative writing techniques ks3 creative writing poetry professor jobs doing homework meme creative writing on ramadan university of virginia charlottesville mfa creative writing creative writingaday at the park website that writes an essay help writing cover letter my6year old hates doing homework entry level medical writer cover letter best resume writing service for lawyers homework doesn't help students creative writing monsters essay on doing gender traduzione inglese doing homework gene editing thesis statement after school homework help near me business plan writing online creative writing for kindergarten students how to leadacreative writing group creative writing exercises for writers heart beating fast creative writing what doesacreative writing portfolio look like creative writing mnemonic hard bound thesis price philippines
बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. १ अबृ २८ करोड ८० लाख ८४ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकको खुद नाफा १८ दशमलव १८ प्रतिशत बढी भएको हो । गत वर्षसम्म रु. ४१ करोड १ लाख ९ हजार ऋणात्मक रहेको बैंकको वितरणयोग्य नाफा यस वर्ष रु. ८४ करोड ७६ लाख ३९ हजार रहेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा ८ दशमलव ३८ प्रतिशतभन्दा बढी रु. १ खर्ब ६ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख १६ हजार निक्षेप संकलन गरेको बैंकले १६ दशमलव २८ प्रतिशत बढी रु. १ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख ४३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
यस वर्ष ९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको बैंकको चुक्ता पुँजी रु. १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ९० हजार पुगेको छ । जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ३३ दशमलव ६७ प्रतिशतभन्दा बढी रु. ५ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख १० हजार कायम भएको छ । गत वर्ष १ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात यस वर्ष शून्य दशमलव ७१ प्रतिशतमा झरेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रु. १६ दशमलव शून्य ६ रहेको छ । बिहीवार बैंकको अन्तिम शेयर मूल्य रु. ३६२ कायम भएको छ ।
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो ओपनिङ बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले बजारमा आगामी दिन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ७४ दशमलव ४४ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन १० दशमलव ५१ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मध्यम हुन्छ भने प्रतिफल पनि मध्यम हुने गर्दछ ।
बिहीवारको शेयर मूल्य रु. ३६२ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ३३३ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको ५९ कारोबार दिनको मूल्य हेर्दा यो दिनको मूल्य हालसम्मकै उच्च रहेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड कम्पनी विश्लेषण
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक कम्पनी विश्लेषण
हिमालयन बैंकको नयाँ शाखा ललितपुरको झम्सिखेलमा
कस्तो अचम्म रात परेपछि कैदीहरु होटलमा